पति बाहिर भएको बेला गर्भवती भएकी श्रीमतीले दिइन् दुनियाँ चकित हुने यस्तो जवाफ – " सुलभ खबर "
काठमाडौं । विश्वमा हरेक दिन नयाँ र अनौठा घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । अहिले बाहिर आएको समाचार भारत बिहार राज्यको हो। जगदीशपुर पुलिस क्षेत्र यहाँ छ । यहाँ एक महिला गर्भवती हुने बित्तिकै बबाल भएको छ । महिलाको नन्द यस सम्बन्धमा डीआईजी पुगेकी थिईन् । अब तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ, के भयो ?
नन्द रिसाएको मात्र थिइनन्, महिलाका पतिले पनि यो को हो भनेर प्रश्न गर्न थाले ? अब ती आइमाईले दिएको जवाफ सबैभन्दा रोचक छ । उनले गाउँ पञ्चायत बसेका बेला आफुसँग राती सपनामा आएर पतिले यौन सम्बन्ध राखेको अनी बच्चा पनि उनैको भएको दावा गरिन् ।